Miandry takalo … | Karenichia
Saingy en passant, tsara kokoa raha mba azo natao ny niverina tamin’izany andron’ny takalo izany dia angamba ho tsaratsara kokoa noho izao ny fiainantsika malagasy. Hoy nareo izao hoe mba attardee mihitsy koa ilay mpanoratra. Izany ve dia mba ho tsara? Marina fa nisy ny hafetsifetsena tamin’izany. Izao kosa anefa ny fitiavan-tena diso tafahoatra no manjaka. Ka iza no tsara?
Ilay toetra miandry valiny foana izay rehefa mba manao soa olona no tian-kasian-teny kely. Tsy voatery hoe vola, harena, na zavatra mivaingana no andrasana fa mety koa ohatra hoe fanerena an-kolaka fiarahana. Tsy mazava? Ohatra: Rabe nampindrana vola an-dRakoto mianakavy fa latsaka an-katerena ry zareo, tsy nangataka na inona na inona izy fa ho setriny kosa dia lasa vadiny rakalakely zana-dRakoto taty aoriana. Mety hiteny ianao hoe ny hadalan-dRakoto izany fa tsy nisy nanery azy saingy fantaro fa na nisy resaka tany ambadika tany entre n’i Rabe sy Rakoto na nisy fifanarahana mihitsy amin’izay tsy efaina intsony ilay trosa. Ny azo antoka aloha dia an-kavitsiana na zara raha misy ny olona no mba manao soa olona anakiray ka tsy miandry takalony na valisoa avy amin’ilay ampiana. Hoy indray nareo hoe lojikan-javatra anie izany e! Ho ahy anefa ny tsirairay samy manana ny lojikany. Sady tsy adala koa anie ilay olona ampiana e! Hainy foana ny mamaly izany rehefa misy ny hamaliana azy. Rehefa tsy misy bazon’io olona atao anefa dia mazana lasa niavona ilay nanampy fa heveriny ho tsy reconnaissant ny olona iray raha tsy manolotra zavatra na teny fanomezan-toky sns ho azy. Mahavariana.
3 Responses to “Miandry takalo …”
Mavarina fa mamaky an’ity soratrao ity aho dia lasa amin’ny ilay tantara oe “pay it forward” ny saiko.
Mety fantatrao io film io. Ilay resaka izany de oe tsisy miandry takalo izany fa rahatoa tena “gratitude” no tiana aseho dia olona afa no tokony hatolotra fanampina fa tsy ilay olona nanampy.
Ity misy fanazavana kely.
Toy ny ankabeazan’ny zavatra maro ihany angamba : misy mahatsara azy, fa misy koa maharatsy azy.
Raha olona iray no ampiana dia mety tsy hiandry ilay “takalo”. Fa raha olona 50 no ampiana ara-bola, dia miandrasa ihany takalo sao sendra ny ataon’ny Ntaolona hoe Kamboty be fihantrana ka hifindran’ny fahorian’ny sasany.
Ny toe-tsaina ampiana lava fotsiny dia tsy mampivoatra. Raha tsy mba iandrasam-baliny ny olona fa ampiana maimai-poana dia mety tsy ho tsapany iny fanampiana iny ka ho verivery foana.
Farany : tena misy tokoa ny olona tsy mahalala ny hanampiana azy ka. Hofatrano telo volana ohatra tsy voaloha – dia nefa izy indray no miavona amin’ny tompon-trano avy eo 🙂
raha izany no dinihina dia tena maplahelo tokoa rah aresaka fanambadian fa ny olona eto afovoan-tany no tena manao anio resaka io ary rehfa banjinina anie tsy manan vola hmerenana i rakoto anefa nihindrana koa rariny rahah lasa vadiny ny zanaky rabe satria resaka tolotra sy tinady io ra namana.
ny tena mampalahelo kosa anefa dia rehafa miseo milay ny olona ampiana ary tsy dia mahay manaja na irony olona ato oe misozy irony na koa ny tena marina dia irony olona be complexe ireony anefa tsy dia mahavita azy satria arak ny flojofia any pakysse dia oe “PARLE PEU ET PASSE A L’ACTE”
Nosy maitso… »